सूची र परिक्षा तालिका प्रकाशित गरिएकाे बारे जरुरी सूचना । (२०७७/१२/२९)
सहकारी स‌स्थाहरुले पेश गर्नुपर्ने चौमासिक प्रतिवेदन फारम
प्रारम्भिक सूची तथा परीक्षा तालिका प्रकाशित सम्बन्धी सूचना । (२०७७/१२/२५)
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१०)
वर्खे घाँसको बिउ वितरण सम्बन्धी सूचना !!
मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम २०७७ सम्बन्धी सूचना !! [मितिः २०७७।१२।०८]
जेहेन्दार तथा गरिब स्थानीय वासिन्दा विद्यार्थीका लागि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७७/१२/०६)
मौरी पालक कृषकलाई व्यवसाय बनाउनको लागि ५०% लागत सहभागीतामा मौरी घार वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना। (२०७७/११/२६)
अदुवा पकेट सम्बन्धी सूचना । (२०७७/११/२६)
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । (दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र सहित । २०७७/११/२३)
२०७२।४।२४ मा सम्पन्न बार्षिक समिक्षाकाे वैठककाे प्रतिवेदा सार्वजनिककरण
विदुर नगरपालिका कार्यालय, नुवाकोट
बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभूत मार्गदर्शन,
सडकको न्यूनतम चौडाई ६ मिटर हुनुपर्ने ।
सडकको न्यूनतम क्षेत्राधिकार ६ मिटर कायम हुनुपर्ने ।
सडकको न्यूनतम सेडव्याक सडक किनारावाट १.५ मिटर छोड्नुपर्ने ।
सेडव्याक छोडेर मात्र पर्खाल लगाउन पाइने ।
सडकको क्षेत्रधिकार र सेड व्याक भित्र टप, वार्दली, छज्जी आदि कुनै पनि संरचनाहरु बनाउन नपाउने ।
भवन निर्माण क्षेत्र भित्र पनि एक मिटर भन्दा वढिको टप, वार्दली, छज्जी निकाल्न नपाइने ।
घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाई भन्दा कम्तिमा २० प्रतिशतले वढि हुनुपर्ने ।
सार्वजनिक जग्गालाई वाटो देखाइ नक्सापास गर्न नपाइने ।
आवासीय भवनमा २५० वर्गमिटर सम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सो भन्दा वढिको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने ।
सरकारी अर्ध सरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने ।
क र ख वर्गका भवनहरुमा निर्माणस्थलमा निर्माण अवधि भरी भवन अनुमती पत्र, नक्सा, सेडव्याक, Ground Coverage Ratio, Floor Area Ratio आदि विवरण सहितको होडिङ्गवोर्ड राखिनुपर्ने ।
जग्गा प्लटिङ्ग लागि सम्वन्धित स्थानीय निकायवाट Planning Permit लिनुपर्ने ।
पर्खालको अधिकतम उचाइ ४ फिट हुने र सो भन्दा माथि वढिमा ३ फिटसम्म जालि राख्न सकिने ।
पर्खालको समेत अनिवार्य रुपमा नक्सापास गरिनुपर्ने ।
आफ्नो जग्गा जमिनको संरक्षणको लागि हरित वार (रुख विरुवा) लगाउन सकिने ।
जोखिमयुक्त पर्खालहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने ।
नक्सापास गर्दा सेफ्टि ट्यांकी सहितको नक्सा पास गरिनुपर्ने ।
सडकको क्षेत्रधिकार भित्र परेका गैरकानुनी संरचनाहरुलाई भत्काउनु पर्ने ।
साविकका गल्ली समेत कम्तिमा ४ मिटर चौडा कायम गनुपर्ने ।
गल्ली भित्र समेत एम्वुलेन्स, दमकल पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
भवन संहिता २०६० अनुसारको भवन निर्माण गर्दा जग्गाको साँधसीमानावाट न्यूनतम १ मीटर छोडेर मात्र भवनको आइसोलेटेड पिलर जग (Isolated Column Footing) तथा भारवहन गार्हो निर्माण गर्न पाइने । तर तोकिएका पुराना तथा घना आवासिय वस्तीका आवासिय घरमा संयुक्त पिलर (Combined Column Footing) लगायतका इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरि गर्न बाधा नपर्ने ।
विस्तृत जानकारीकाे लागि http://bidurmun.gov.np/ne/node/90
मिति २०७२ साउन २४ गते विदुर नगरपालिकाको सभा कक्षमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, नागरिक समाज, सन्चार कर्मी, विषयगत कार्यालयका प्रमूख, विभिन्न गैर्हसरकारी संस्थाका प्रमुख एवं विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थितीमा विषयगत कार्यालय, विभिन्न गैर्हसरकारी संस्था, नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा आ.व. २०७१।७२ मा सम्पन्न गरिएका कार्य प्रगतीको प्रस्तुतीकरणका साथै समीक्षा गरीयो र सो समीक्षावाट विभिन्न सुझावहरु प्राप्त भई सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरीयो ।